Shina M1013 pvc fonon-tanana vita amin'ny tanana tsara kalitao pvc kalitao 10 boaty pvc fonon-tanana fiarovana Fividianana sy mpamatsy | Xinyuanjiaye
Havona vita tànana M1013 pvc
Fonon-tànana M1013 pvc kalitao avo lenta amin'ny fehikibo vita amin'ny 10 kitapo pvc fonon-tanana
Fiarovana ny mari-pahaizana ambony momba ny fitsaboana tsy misy vovo-dronono ary tsy misy proteinina latina. Ny fonon-tanana vidyl tonga lafatra ho an'ny olona voakasiky ny fahatsapan-dàlana amin'ny tara. Sarotra, voasarona cuff. Tanjaka hafahafa. Malalaka ny vovo-paty ka tsy hanelingelina ny adhesive na coating izy ireo.
Ny Gloves Vinyl maimaim-poana dia manolotra ny synthetic 100%, somary maivana sy malefaka kokoa noho ny vinyl mahazatra ary manana fiarovana parctika ho an'ny applicatgions maro. Fahatsapana tsara sy fampisehoana tsara. Izany dia fanaraha-maso tsara ho an'izay mijaly amin'ny Type I allergy.
1.Ny fitaovana dia pvc, izay tsy mamitaka, tsy manitra ary mahafinaritra, miforitra amin'ny fonosana amin'ny tanana rehetra ny fonon-tanana.
2.Madio fanadiovana, voaro ny fonon-tanana, atsipinao fotsiny izy rehefa ampiasao.
3.Namboamboatra endrika sy maivana mora, mora entina.
4.Manadiovy ny tananao
Torohevitra momba ny fitafy ny fonon-tànana PVC vinyl azo ampiasaina:
1. Azafady esory ny rantsan-tànana rehefa mitafy. Ny taovolo lava loatra na maranitra dia mora manimba ny fonon-tanana.
2. Azafady azafady mba hoentina ny palavin'ny rantsananao, mba tsy hianjera ny fonon-tànana.
3. Azafady avereno ny fonon-tànana amin'ny tànanao rantsantanana amin'ny rantsantanana rehefa esorina ny fonon-tanana.
Ny dingana famokarana fonon-tanana latina: ny fonon-tànana vita amin'ny Latex vita amin'ny akora vita amin'ny synthetic / natural latex ary mpanampy tsara hafa dia manana tanjaka milamina tsara sy fanalavana; fizotran'ny fitsaboana tsy manam-paharoa, tsy mikorontana hoditra sy allergy; ny vokatra manana fitsaboana manokana amin'ny tarehy, malefaka anatiny sy curling dia mora hita sy mahazo aina.
Ny tombony vita amin'ny fonon-tory latinina: ny fonon-tanana vita amin'ny latex dia misy eran-tany amin'ny tanana roa, misy ny fehin-tànana curling ary ny famoronana anti-skid amin'ny endrika; Izy ireo dia sakanana sy sakanana izy ireo dia mahatohitra asidra, alkali, menaka, menaka solika sy solika maro isan-karazany, sns.; manana fanoherana simika maro izy ireo, fanoherana ny menaka tsara ary fiarovana / fiarovana / tanana
Ny fampiasana fonon-tànana vita amin'ny latinina: Ny fonon-tanana vita amin'ny latex dia mety amin'ny trano, indostria, hatsarana, fikarohana siantifika, zavamananaina, fanamboarana fiara, fanamboarana bateria, indostrian'ny FRP, fivoriam-piaramanidina, indostria aerospace, fanadiovana ny tontolo iainana sy fanadiovana.
Sarotika fiarovana miaro tena: Saron-tava miaro azo esorina ny ankamaroan'ny lamba vita amin'ny 2 ~ 3 tsy misy lalany. Ny saron-tavy fiarovana azo ampiasaina dia ampiasaina amin'ny vovoka malefaka sy manivana zavatra matevina.
Masedahy saron-tava: Ireo saron-tava azo ampiasaina dia misy takelaka 3, misy ny takelaka roa tsy mifangaro ary ny takelaka iray vita amin'ny lamba mitsoka, izay mahomby manivana ny sosona, bakteria, resaka sombin-javatra, sns. Asaina misafidy mandritra ny vanim-potoana manokana. izay mety hahazo fiarovana bebe kokoa.
KN95 saron-tava fiarovana: Ny mason-tsivana KN95 amin'ny ankapobeny dia misy takelaka 4 ~ 5, ao anatin'izany ny lamba tsy manenona ary lamba 1 ~ 2 meltblown. Ny akora saron-tava vovoka dia tsy tokony hanelingelina sy tsy alerine amin'ny hoditra, ary tsy manimba ny vatan'olombelona ny fitaovana sivana; ny sakan'ny sombin-tariby dia tokony ho latsaky ny microns 5 ary ny taham-pandresena vovoka dia tsy maintsy lehibe kokoa noho ny 95%. Amin'izany, ny sandan'ny 95% dia tsy ny salan'isa salan'isa, fa ny sandany ambany indrindra, noho izany ny salan'isan'ny vokatra tena izy dia mihoatra ny 99%.
FFP3 fanivanana mahomby 99%, FFP2 95%, ary FFP1 80% ~ 90%. Ny halavam-pahavitr'ireo zavatra mampidi-doza dia eo amin'ny 60-400nm, ny saron-tava dia tsy afaka mandalo ireo singa lehibe noho izany satria mahomby amin'ny fanakanana ny famonoana manimba.
Previous: Saron-tady amboara
Manaraka: Ny Glamgles Anti Saliva Fog dia manopy ny goggles mazava ny vongan-tsofina miaro ny maso amin'ny fampiasana ara-pitsaboana
SGS manamarina 75% tanana tsy misy rano alikaola ...
Ny fitotoan'ny oloky ny fiarovana amin'ny saliva
kiraro fanariana kalitao avo lenta
Fampandrenesana fanalefahana azo avy amin'ny vovoka marefo KN95 ...